DIY ကြိတ်ဆုံသစ်သားပေါ်ရှိအကြံပြုချက်များ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / DIY ကြိတ်တခွေထင်းအပေါ်အချို့သောအကြံပြုချက်များ
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-12-29 မူလ:ဆိုက်ကို
သဲများသည်များသောအားဖြင့်လျစ်လျူရှုထားသည့်မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှုအဆင့်ကိုရှင်းလင်းသောသစ်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လျစ်လျူရှုထားသည့်မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှုခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အချောထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးနှင့်တူညီမှုသည်သင့်လျော်သောကြိတ်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်ကိရိယာပွန်ကြောင်း။ ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန်အတွက်အောက်ပါရိုးရှင်းသောအဆင့်များဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်.
1 ။ရွေးချယ်ခြင်း RipAပေါ်ရှိ /Tool
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာမှာအလုပ်၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော, လက်လှမ်းမမီသောဒေသများနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပရိဘောဂများသို့မဟုတ်ပုံသွင်းခြင်းများအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပရိဘောဂများသို့မဟုတ်ပုံသွင်းထားသောနေရာများအတွက်, ပိုကြီးတဲ့အလုပ်နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့များအတွက်,မော်တာကိုပိုကောင်းတဲ့, ပိုမြန်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့သစ်သားဖြစ်ပါတယ်ပင့်ကူပစ္စည်းကိရိယာများ။ Belt Sanders များသည်ကြီးမားသောပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်များကိုချောချောမွေ့မွေ့စေရန်နှင့်ဆေးသုတ်ခြင်း, အရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
2 ။ရွေးချယ်ခြင်း Sထည့်သွင်းSစာမျက်နှာ
ဖြစ်စေအရည်အသွေးမြင့်ကြိတ်စက်သို့မဟုတ်လက်ဆီလက်အသုံးပြုသွားမည်အသေးငယ်ဆုံးစက္ကူကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်စာချုပ်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိချို့ယွင်းချက်များသို့မဟုတ်ပုံသဏ္ဌာန်ပုံသဏ္ under ာန်ကိုဖယ်ရှားရန် ed ။ 40 မှ 60 ရိန်း emery စက္ကူf ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ကြမ်းသဲနှင့်ချွတ်ချွတ်.80 မှ 120 သဲစက္ကူရွေးချယ်နိုင်ပါသည်smoo များအတွက်`မျက်နှာပြင်နှင့်သေးငယ်တဲ့ချွတ်ယွင်းဖယ်ရှားခြင်း.မျက်နှာပြင်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးအောင်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် Ultra ၏လက်အောက်ခံ 360 မှ 400 အထိရှိသည်စာချုပ်ed ။
သစ်သား, သစ်မာမျိုးစေ့အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ သစ်သား၏ကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်ခြင်းသည်ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်အခြေအနေtသူကသစ်သားလုပ်နိုင်တယ်မဟုတ်ခြယ်သခံရပါလိမ့်မည်။ ကြိတ်တုန်းကဖုန်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံး, လက်အိတ်များနှင့်ဘေးကင်းရေးမျက်မှန်ကိုဝတ်ဆင်ပါ။
သစ်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကော်ကျန်ရှိသည့်ကော်ကိုခြစ်ပြီးသဲလွန်စများကိုအညီအမျှဖယ်ရှားပါ။ Sawdust ဖယ်ရှားရန် Microfiber အထည်နှင့်မျက်နှာပြင်အားလုံးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ဘယ်တော့လဲလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်အသုံးပြုသည်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပါကြိတ်သောနှင့်အပြိုင်သစ်သားခြစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်စပါး။ ရွှေ့ပါGrinder toolမလိုအပ်သောကြိတ်ခွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အချိန်မရွေး။ ကြမ်းတမ်းသောကျောက်စရစ်ခါးပတ်သို့မဟုတ်ကြိတ်စက်နှင့်အတူစတင်ပါ။ အရမ်းကိုမဖိပါနဲ့, မဟုတ်ရင်ကြိတ်ပန်းကန်သို့မဟုတ်ခါးပတ်ကိုပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မယ်. Ltool ၏အလေးချိန်သည်မှန်ကန်သောဖိအားပေးမှုကိုပေးသည်။ လှျင်mIni လက်ကြေးနန်း ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်လက်စွဲကြိတ်ခြင်းအတွက်တူညီသောအထွေထွေဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်သင့်လိုက်ed.
5. သန့်ရှင်းရေးနှင့်Pအတွက် repareNရေနံSTep
ကြိတ်ပြီးနောက်, အရောင်အေးဂျင့်ကိုအသုံးမပြုမီမျက်နှာပြင်ကို Microfiber သို့မဟုတ်ကော်အထည်များဖြင့်သန့်ရှင်းပါ။အင်္ကျီအေးဂျင့်သို့မဟုတ်အပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်း ing ။
အထက်ပါအဆင့်များပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အလုပ်ကို ထပ်မံ. ကြိတ်ရန်လိုအပ်သည်ပိုလန် grinder Super Moor Smake Effect ကိုရရှိရန်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းချက်များကိုမဆိုချောမွေ့စေရန်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်မမှန်များကိုချောမွေ့စေရန်။
ကြိတ်၏ပထမစည်းမျဉ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တူးရန်ကြိတ်စက်သစ်သား၏စပါးတစ်တှငျကြိတ်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစပါးကိုဆန့်ကျင်ရင်ဖလားကိုရင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာသိသာထင်ရှားတဲ့အမြဲတမ်းခြစ်ရာတွေကိုချန်ထားလိမ့်မယ်။ ဒုတိယစည်းမျဉ်းမှာကြိတ်ခွဲသောလုပ်ကွက်များကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်, အကြောင်းမှာကြိတ်ခွဲသောလုပ်ကွက်များကိုအသုံးမပြုပါက,ထိုအခါယူနီဖောင်းကြိတ်ခွန်အား သေတမ်းစာအာမခံချက်မရ
လက်ကိရိယာ Grinder မော်တာကို ပင့်ကူပစ္စည်းကိရိယာများ အရည်အသွေးမြင့်ကြိတ်စက် လက်ဆီလက် လျှပ်စစ်ကြိတ်စက် လက် Grinder tool ကို mini လက်ကြွေစက် ပိုလန် grinder တူးရန်ကြိတ်စက်